किन चिकेन स्वास्थको लागि राम्रो?::kamananews
किन चिकेन स्वास्थको लागि राम्रो?
यदि तपाईं संयुक्त राज्यमा बस्नुहुन्छ भने, चिकन शायद तपाईंको आहारमा एउटा स्टपल हो, खासकर यदि तपाईंले स्वस्थ खाने योजना लागू गर्नुभएको छ। खाना गाइड गाइड पिरामिड मा मासु र सेम समूह को भाग, चिकन आवश्यक पोषक तत्वहरु देखि भरी छ कि तपाईंको शरीर को आवश्यकता छ, जबकि अन्य मासु कि कम अस्वस्थ गुणहरु लाई लिएर। एक बेकार, छालाहीन चिकन स्तन एक उत्कृष्ट कम-फ्याट खाना हो जसले विभिन्न तरिकामा तयार हुन सक्छ र धेरै विभिन्न व्यञ्जनहरूमा फिट बस्छ।
छाला रहित चिकन स्तन प्रोटीनको २७ ग्राम प्याक गर्छ, जसमा मानव स्वास्थ्यको लागि आवश्यक सबै अमीनो एसिडहरू समावेश छन्। प्रोटीन तपाईंको शरीर मा सबै मांसपेशी ऊतकों को एक प्रमुख भवन ब्लक हो, जिसमें कंकाल मांसपेशिहरु, दिल को ऊतक र चिकनी मांसपेशियों सहित तपाईंको आंतों को पर्खालहरुमा पाइन्छ। प्रोटीन पनि शरीर मा अन्य संरचनाहरु को रखरखाव र भवन को लागी जिम्मेदार छन् जस्तै कोशिकाहरु र हड्डी, र धेरै महत्वपूर्ण नौकरिहरु को प्रदर्शन, विषाक्त पदार्थ को टूटने सहित।
धेरै प्रोटीन विकल्पहरूको तुलनामा संतृप्त वसामा चिकन सेतो अपेक्षाकृत कम हुन्छ, विशेष गरी जब छाला हटाइन्छ। उच्च मांसपेशी मासुको लागि चिकन प्रतिस्थापन गरेर, तपाईं आफ्नो एलडीएल, वा “खराब” कोलेस्ट्रललाई कम गरेर हृदय रोगको विकासको जोखिम घटाउनुहुनेछ। तल्लो बोसो विकल्पहरू खानाले तपाईंलाई स्वस्थ वजन को बनाए राख्न पनि मद्दत गर्नेछ। ग्रिलिंग, दलाल र बेकिंग फ्याट सामग्री यसको तल्लो तहमा राख्न को लागी उत्तम पाकिंग विधिहरू हुन्।
चिकन सेलेनियम को एक महान स्रोत हो, जो एक ट्रेस तत्व को क्यान्सर देखि लडने को दिखाया गएको छ। सेलेनियम पनि अन्य फेरी उत्पन हुने रोगहरु को घटना मा एक सकारात्मक प्रभाव को लागी सोचेको छ, भ्रामक रोगहरु, हृदय रोग, न्यूरोलोजी रोग र संक्रमण सहित। सेलेनियम एक एंटीओक्सिडेंट हो र क्यान्सर-प्रवर्द्धन मुक्त रेडिकलहरू विरुद्ध लड्ने क्षमतामा भिटामिन सी र ई गतिविधिमा सकारात्मक असर पार्दछ। चिकनले33 औंस भागको 24 माइक्रोग्रामको भाग, वा दैनिक दिनको स्यालेनियमको 44 प्रतिशत समावेश गर्दछ।
भिटामिन बी 6
भिटामिन बी6 वा पिरिडक्सिन, चिकनमा पाइन्छ र प्रोटीन र कार्बोहाइड्रेटको चयापचय प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ। यसले इन्सुलिन, सेतो र रातो रक्त कोशिकाहरू, न्यूरोट्रांसमीटर, एंजाइमहरू, डीएनए, आरएनए र प्रोस्टाग्लैंडिनको उत्पादनमा सहायता गर्दछ। भिटामिन बी6 को बिना, तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली, चयापचय र केन्द्रीय तंत्रिका तंत्रले राम्रो काम गर्दैन। भिटामिन बी6 को सक्रिय रूप, पिराइडक्सलल फास्फेट (पीएलपी) भनिन्छ, मानव चयापचय मा सबै भन्दा ठूलो प्रभाव छ। प्रत्येक कुखुराको सेवन गर्ने तपाईंको दैनिक सिफारिस गरिएका भिटामिन बी-6 सेवनको ४० प्रतिशत समावेश गर्दछ
भिटामिन बी 3
भिटामिन बी 3, नाइसिइनको रूपमा पनि चिनिन्छ, पोल्ट्री र मासुमा भरपर्दो मात्रामा पाइन्छ। भिटामिन बी3कार्बोहाइड्रेटलाई ऊर्जा परिवर्तन गर्न र शरीरका सेलको स्वास्थ्यको स्वास्थ्यको लागि जिम्मेवार छ। भिटामिन बी3 लाई पनि कोलेस्ट्रोल-कम असर पार्ने देखाइएको छ, र यसैले यो हृदय रोग को लागि उच्च रक्तचाप को खतरा मा सकारात्मक प्रभाव को लागी एक सकारात्मक प्रभाव को लागी सोचेको छ जो उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर हो। चिकन महिलाहरु को लागि दैनिक नाइसिइन सेवन को 84 प्रतिशत र ७४ प्रतिशत पुरुषहरु को लागि प्रदान गर्दछ।